Apple inogadzira inoshanda-inokwenenzvera-LED mapaneru eApple Tarisa 2 | IPhone nhau
Runyerekupe rwazvino nezve chizvarwa chechipiri Apple Watch Ivo vanoita kuti isu tifunge kuti avo veCupertino vanozopa modhi nyowani mune imwecheteyo kiyi umo mavanoburitsa pachena iyo iPhone 7. Saka, makore maviri angadai apfuura kubva pakaunzwa modhi yekutanga. Asi runyerekupe rwazvino rwunoita kuti tifunge kuti apuro smart wachi ichavandudzwa zvakare kamwe pagore, kungofanana neiyo iPhone uye, kana pasina zvekushamisika senge muna 2015, iyo iPad. Zvichida izvozvo kana kamwe chete pamakore matatu.
Runyerekupe rutsva zvinosvika kwatiri kubva kuTaiwanese wepakati DigiTimes, uyo anodoma cheni yekuTaiwanese sosi, kwavanovimbisa kuti Tim Cook nekambani vari kusimukira micro-akatungamirira ukomba iyo ichashandiswa muApple Watch iyo ichaunzwa muhafu yepiri ya2017. Aya mapaneru matsva aitsiva maOLED ayo ave achishandiswa muchizvarwa chekutanga uye aizoshandiswawo muchizvarwa chechipiri kana vakazoona mwenje unotevera Gunyana.
Inotevera Apple Watch yaizodya bhatiri shoma
Nemasikisi kubva ku1 micron kusvika ku100 microns, kugadzirwa kweiyo micro-LED mapaneru iri inodhura kupfuura mapaneru eOLED iyo, zvakare, inodhura kupfuura iyo LCD mapaneru ayo Apple ari kushandisa pane iyo iPhone neMacBook. Asi zvingangoita kuti mutengo wekugadzira wakadzikira kupfuura isu zvatingafungidzira pakutanga, sezvo Apple yakatenga muna 2014 iyo LuxVue kambani, kambani yakatsaurirwa kugadzirwa kwema micro-LED skrini.
Kune rimwe divi, zvine musoro kuti nekukurumidza kana kuti gare gare ivo vanotanga kushandisa LuxVue tekinoroji, asi DigiTimes haigare ichiwana zvavanofungidzira zvakanaka. Ini pachangu, handifunge kuti Apple iri kuzoburitsa Apple Watch gore rega rega. Pane kudaro, ndinenge ndichifunga kufunga kuti, kana zviri izvo chaizvo, iyo 2017 Apple Watch ine micro-LED mapaneru ichave chizvarwa chechipiri. Tichava neApple Watch nyowani gore rega rega, makore matatu ega ega, kana kuti DigiTimes haizorove nguva ino?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inovandudza inowedzera inoshanda micro-LED mapaneru eiyo 2017 Apple Watch